Confrontingalegacy of crime and corruption in Myanmar’s illegal teak trade - EIA
In December 2018, on International Anti-Corruption Day, Myanmar President U Win Myint stated that “The Union Government will take effective administrative steps to rectify the weak areas in fighting corruption.” A bold and welcome statement, but tacit support is not enough because no President, Minister or Ministry alone has the power to fight the deep cancer destroying all parts of Myanmar’s fragile future – corruption.
Forests are being destroyed because Myanmar is one of the most corrupt countries in the world; in 2018, it was ranked 132 out of 180 on Transparency International’s Corruption Index and many in the political, business and military elite are unwilling to surrender the wealth and power that the country’s natural resources have given them.
Last month, we released our report State of Corruption: The top-level conspiracy behind the global trade in Myanmar’s stolen teakwhich showed how, for three decades, the multi-million dollar international trade in Burmese teak has been riddled with crime and high-level corruption, driving conflict and human rights abuses in Myanmar.
In response to the report, the Myanmar Timber Enterprise gave an interview to Frontier Myanmar magazine, published in both English and Burmese. Essentially, it claimed the network exposed in our report is an old structure with no relevance to the present, that this happened years ago and the main actor, PC Cheng, was dead, so what’s the problem?
The problem is that this network’s legacy still survives. It is estimated that up to 100,000 tonnes of teak cut during the worst excesses of overharvesting prior to the 2016/17 national logging ban are still sitting in Myanmar and being offered to the international community with limited information on the legal origin of this timber and no acknowledgement of the role of corruption in its production.
Refusing to look back and not understanding how the country’s current system works only perpetuates the opaque and bad forest governance that exists today. The problem is that without understanding the details, Myanmar will not be able to take the brave steps it desperately needs to take for true reform to happen.
In Myanmar, political instability and an economic crisis have createdasituation where forest law enforcement has broken down. It is widely accepted that the military and police are making huge amounts of money from illegal logging and over the years only the small players have been arrested and, maybe, prosecuted. This is not about subsistence logging by local people, it is about the highly organised and vastly profitable international trafficking of timber stolen from Myanmar’s diminishing forests.
We have been investigating illegal logging and the associated illicit trade in timber since 1999. Understanding the methods, actors and drivers inacountry has providedaunique insight into how this natural resource is about far more than trees.
In all the countries in which we have worked in South-East Asia, the core of the problem is corruption, top-down policies led by the centre and failure to include those whose livelihoods and survival rely on their forests.
The commercial and international trade of valuable hardwoods exists because of the market. We recognised that to combat this forest crime we needed to ensure that traders consuming this timber were also part of the solution. Recognising thatalot of what we were documenting was not trade but crime, we found pushing foraregulatory response was the only way to combat illegal logging and the associated illicit trade. Such laws now exist inarange of consumer markets, notably the US, EU and Australia.
None of these laws were aimed at only one country and none seek to undermine reform; in fact, these laws are in place to do the opposite. For instance, the European Union Timber Regulation (EUTR) exists to support producer countries in their efforts to improve governance within the sector and to help to re-define legality in an inclusive way which includes all stakeholders. Myanmar is not being singled out, as suggested by the Myanmar Timber Enterprise; the EUTR is also focused on European operators and suppliers, who likely know full well the problems that Myanmar has and continue to take advantage of the situation.
One country turningablind eye to its involvement in driving corruption and undermining any hope of forest reform in Myanmar is neighbouring China, the world’s largest consumer of illegally logged timber, which has yet to regulate against imports of stolen wood.
To combat illegal logging and address the vast flows of timber into China, Myanmar enactedalog export ban in 2014. This was followed byanationwide logging ban in 2016-17, yet China continues to benefit from illicit cross-border trade. Between 2007-17, the trade of teak logs and sawn teak wood from Myanmar to China is estimated at 1.4 million m3 – worth nearly one billion dollars– with the vast majority of this being illegal cross-border trade.
As part of any future dialogue, Myanmar’s leaders must urge China to support their country’s efforts to combat corruption and crime in the forestry sector. The first thing China can do is enactareciprocal log import ban and move towardaregulation prohibiting illegally sourced timber from entering its market. This would not only support Myanmar’s efforts but those of many other producer countries around the world which are struggling for good forest governance.
No single ministry alone can address the underlying problems associated with illegal logging. We have met with and seen how individual champions within the Forestry Department, working withinacomplex set of issues far beyond the remit ofaforester, are trying desperately to combat forest crime. It is wrong to expect them to do so without the support of the Government asawhole.
The President must personally ensure that his Government acts against timber barons by creatingacross-ministerial taskforce with the mandate and ability to enforce against high-level actors. Honest and proactive reformist officials desperately need support from honest enforcement officers, prosecutors and judges –adifficult thing to do, especially as these problems are the legacy of the military regime which, given its continued authority, still benefits from the opening up of Myanmar’s forests to international markets in 1989.
There needs to beaclear instruction from Myanmar’s leaders to the National Reconciliation and Peace Centre (NRPC) to stop setting agreements with ethnic armed organisations for the sale of hardwoods, including teak. The recent authorisation from the NRPC to the National People’s Liberation Front (KNPLF), in Kayah state, to extract and sell 5,000 tons totally undermines any approach for good forest governance and begs the question as to why the NRPC has authority over Myanmar’s forests in the first place. Because of the lack of transparency, no-one other than those who profited even knows if it was in fact 5,000 tons, where the timber came from or to whom it was sold.
In addition, the country’s Parliament needs to harness the knowledge and talents of those within the relevant resource committees who can lead to ensure comprehensive solutions. This must be done by ensuring that any policies being considered include input from those who already hold so many of the solutions we seek – local communities and indigenous peoples.
The world looks at Myanmar and sees endemic corruption. President Win Myint needs to find the best and most incorruptible people in the enforcement authorities and the judiciary and set them to work.
This is the only way the forests and the people of Myanmar will haveachance to reform and move forward.
Forests Campaigners Leader
ရာဇ၀တ်မှုနှင့် အဂတိလိုက်စားမှု အမွှေဆိုးကို စိန်ခေါ်ခြင်း
”ကမ္ဘာ့ အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးနေ့ကျရောက်သည့် ဒီဇင်ဘာလ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံသမ္မတ ဦးဝင်းမြင့်က ”အဂတိလိုက်စားမှုကို တိုက်ဖျက်ရာတွင် လုပ်ဆောင်ရန် အားနည်းနေသည့် ဏ္ဍများတွင် အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းမှ ပိုမိုထိရောက်စွာလုပ်ဆောင်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း” ပြောဆိုခဲ့သည်။ ရဲရင့်သည့် သူ့ပြောကြားချက်သည် ကြိုဆိုဖွယ်ဖြစ်သည်။သို့သော် ထိုသို့ ပြောကြားရုံဖြင့် မလုံလောက်ပါ။ မြစ်ပွှားနာရောဂါ ကင်ဆာကဲ့သို့ အမြစ်တွယ်နေပြီး
မြန်မာနိုင်ငံ၏ အနာဂတ်ကို ဖျက်ဆီးနေသည့် အဂတိလိုက်စားမှုကို သမ္မတတစ်ဦးတည်း၊
၀န်ကြီးတစ်ဦး သို့မဟုတ် ၀န်ကြီးဌာနတစ်ခုတည်းဖြင့် တိုက်ဖျက်နိုင်သည့် အာဏာမရှိပါ။”
”သစ်တောများ ဖျက်ဆီးခံရသည့်အကြောင်းမှာ မြန်မာနိုင်ငံသည် အဂတိလိုက်စားမှု အများဆံးရှိသော နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် နိုင်ငံတကာ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုအဖွဲ့ (Transparency International) ၏ အဂတိလိုက်စားမှု အညွှန်းဇယားတွင် အဂတိလိုက်စားမှု အမြင့်ဆုံး အဆင့် သတ်မတ်ချက် ၁၈၀ ထဲတွင် မြန်မာနိုင်ငံကို ၁၃၂ အဆင့်တွင် ထည့်တွင်ထား သည်။ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေးနှင့် စစ်တပ်အသိုင်းအ၀ိုင်းမှ အခွင့်ထားရရှိသူများသည် နိုင်ငံ၏
သဘ၀အရင်းအမြစ်များကြောင့် ရရှိထားသော သူတို့ စီးစိမ်နှင့် အာဏာကို လက်မလွတ်လိုကြပါ။
လွန်ခဲ့သည့်လက မိမိတို့ အဖွဲ့အစည်းသည် အဂတိလိုက်စားသော နိုင်ငံတော် – မြန်မာနိုင်ငံက ခိုးယူခံနေရသော ကမ္ဘာ့ကျွန်းသစ်ကုန်သွယ်ရေးနောက်ခံက ထိပ်ပိုင်းအဆင့်
ပူးပေါင်းပါဝင်မှု အစီရင်ခံစာကို ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ ထိုအစီရင်ခံစာတွင် ဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာ တန်ဖိုးရှိသော မြန်မာကျွန်းသစ်ကုန်သွယ်မှုကြောင့် ရာဇ၀တ်မှု၊ ထိပ်ပိုင်း အာဏာပိုင်အဆင့် အဂတိလိုက်စားမှုနှင့် အတူလူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများ ဖြစ်ပွားကာ ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားနေသည်မှာ နှစ်ပေါင်းသုံးဆယ်ခန့် ကြာမြင့်လာပြီ ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ထုတ်ရေးသားထားသည်။
”ထို အစီရင်ခံစာကို တုံ့ပြန်သောအားဖြင့် မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်းတာဝန်ခံက Frontier Myanmar မဂ္ဂဇင်းနှင့် အမေးအဖြေလုပ် ဖြေကြားခဲ့သည်။ သူနှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုကို အင်္ဂလိပ်နှင့် မြန်မာ နှစ်ဘာသာဖြင့် ဖော်ပြခဲ့သည်။ အနှစ်ချုပ်အားဖြင့် သူ့ပြောကြားချက်မှာ အစီရင်ခံစာက ဖော်ထုတ်ခဲ့သော ကွန်ယက်သည် လွန်ခဲ့သည့်ကာလက အဖြစ်အပျက်များဖြစ်ပြီး
လက်ရှိကာလနှင့် သက်ဆိုင်ခြင်းမရှိပဲ အတိတ်ကအဖြစ်အပျက်များသာ ဖြစ်သည်။ အဓိကပုဂ္ဂိုလ် PC Cheng မှာလည်း ဆုံးပါးသွားပြီ ဖြစ်သည်။ အစီရင်ခံစာ ထုတ်ရခြင်း၏ အဓိကအကြောင်းအရင်းမှာ အဘယ်နည်းဟု စောဒကတက်ထားသည်။
”ပြသာနာမှာ သူ့ကွန်ယက်၏ လုပ်ဆောင်ချက်များသည် ဆက်ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ ၂၀၁၆ နှင့်
၂၀၁၇ တစ်နိုင်ငံလုံး သစ်ခုတ်ခွင့်တားမြစ်ချက် မတိုင်မည် အလွန်အကျွံခုတ်လဲထားသော ကျွန်းသစ် များရှိနေဆဲ ဖြစ်သည်။ ထိုကျွန်းများကို နိုင်ငံတကာ ဈေးကွက်သို့ ရောင်းချရာတွင် ခုတ်ယူရာဒေသနှင့် အချက်အလက်များကို အပြည့်အစုံမတင်ပြနိုင်ပါ။ သစ်ထုတ်လုပ်ရာတွင် ရှိနေသော အဂတိလိုက်စားမှု အခြေအနေကိုလည်း ယခုထိ ၀န်ခံထားခြင်း မရှိပါ။”
”အတိတ်ကိ အဖြစ်အပျက်ကို လည့်ကြည့်ရန် ငြင်းဆန်ပြီး လက်ရှိ စနစ်လုပ်ဆောင်ပုံကို နားလည်မှု မရှိခြင်းသည် ပွင့်လင်းမှုမရှိသော ညံ့ဖြင်းသော လက်ရှိ သစ်တော အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကို ဆက်လက် ဖြစ်ပေါ်နေစေမည် ဖြစ်သည်။ ပြသာနာ၏ အသေးစိတ်အခြေအနေကို နားမလည်ပါက လိုအပ်နေသော သတ္တိရှိရှိလုပ်ဆောင်ရမည့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုခြေလမ်းများကိုလှမ်းနိုင်မည်မဟုတ်ပေ။”
”နိုင်ငံရေး မတည်ငြိမ်မှုနှင့် စီပွားရေး အကျပ်အတည်းကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် သစ်တောဥပဒေ လိုက်နာရန် အရေးယူဆောင်ရွက်မှုပျက်ပြားခဲ့သည်။ မြန်မာစစ်တပ်နှင့် ရဲဌာနသည် တရားမ၀င် သစ်ထုတ်လုပ်မှုမှ ငွေအမြောက်အများ ရရှိခဲ့သည်မှာ လူတိုင်း အသိဖြစ်သည်။ အနည်းစုကသာ ဖမ်းခံရပြီး၊ ဥပဒေအရ အရေးယူခံခဲ့ရသည်။ ထိုဖြစ်ရပ်များသည် ဒေသခံလူထုက
သူတို့ အသက်ရှင်ရပ်တည်ရေးအတွက် သစ်ခုတ်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်နေသည်မဟုတ်ပါ။ တစ်စစ ပျက်တုန်းနေသည့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ သစ်တောများမှ သစ်များကို နိုင်ငံတကာတွင် ခိုးယူရောင်းချနေပြီး အကျိုးအမျက်မြောက်များစွာရရှိရန် စနစ်တစ်ကျ လုပ်ဆောင်နေခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။
”မိမိတို့သည် တရားမ၀င် သစ်ထုတ်ခြင်း၊ ၎င်းနှင့် ဆက်စပ်နေသော တရားမ၀င် သစ်ကုန်သွယ်မှု အကြောင်းကို စုံစမ်းလာခဲ့သည်မှာ ၁၉၉၉ ခုနှစ်ကတည်းက ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအတွင်း
သစ်ကုန်သွယ်မှုတွင် ပါဝင်သူ၊ လုပ်ဆောင်ပုံနှင့် ဖြစ်စေသည့် အကြောင်းများကို နားလည်ထားခြင်းဖြင့် သစ်သဘာဝအရင်းအမြစ်ထုတ်လုပ်မှုသည် သစ်ပင်တွေထက်ပိုပြီး လေးနက်ကြောင်းကို ထူးထူးခြားခြားအတွင်းစိတ် သိခွင့်ရလာသည်။”
”မိမိတို့ စုံစမ်းခဲ့သည့် အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများတွင် တွေ့ရသည့် အဓိကပြသာနာမှာ အဂတိလိုက်စား မှု၊ ဗဟိုက ပြဌာန်းသည့် အထက်အောက် မှုဝါဒ နှင့် သစ်တောကို အမှီပြုပြီး ရှင်သန်နေသာသူများ အရေးကို ထည့်တွက်စဉ်းစားရန် ပျက်ကွက်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။”
”ဈေးကွက်ကြောင့်သာ တန်ဖိုးရှိသည့် သစ်မာများကို နိုင်ငံတကာတွင် စီးပွားရေးအရ ရောင်းဝယ်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ သစ်တောဆိုင်ရာ ရာဇ၀တ်မှုများကို တိုက်ဖျက်ရန် သစ်များကို ၀ယ်ယူအသုံးပြုသူများကလည်း ပြသာနာ၏ အဖြေဖြစ်စေရမည်ဟု မိမိတို့အနေဖြင့် ခံယူ လုပ်ဆောင်သည်။ မိမိတို့ စုံစမ်းမတ်တမ်းပြုရာတွင် အများအားဖြင့် တွေ့လာရသည်မှာ ကုန်သွယ်မှုမဟုတ်ဘဲ ရာဇ၀တ်မှုတွေဖြစ်နေကြောင်းကို သိလာခဲ့သည်။ ထိုအခြေအနေတွင် မိမိတို့အနေဖြင့် တရားမ၀င် သစ်ထုတ်မှု၊ ၎င်းနှင့် ဆက်စပ်နေသည့်ကုန်သွယ်မှုများကို တိုက်ဖျက်နိုင်မည့် တစ်ခုတည်းသော နည်းမှာ ဥပဒေကြောင်းအရ လုပ်ဆောင်ခြင်းသာဖြစ်ကြောင်း တွေ့လာရသည်။ တရားမ၀င်သစ်ထုတ်လုပ်မှုကို တားမြစ်သည့် ဥပဒေသည် ယခုအခါ အမေရိက၊ ဥရောပသမဂ္ဂနှင့် သြစတြေးလျကဲ့သို့သော
သစ်ဝယ်ယူသည့် နိုင်ငံများတွင် ရှိနေပြီ ဖြစ်သည်။
ယင်းဥပဒေများသည် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံကိုသာ ရည်ရွယ်သည်မဟုတ်ပါ။ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများကို
ထိခိုက်စေရန် မဟုတ်ပါ။ယင်းဥပဒများသည် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုကို ထိခိုက်စေသည်ဆိုသော ထင်မြင် ယူဆချက်များနှင့် ဆန့်ကျင်ဖက်ဖြစ်သည်။ ဥပမာ ဥရောပသမဂ္ဂသစ်ဥပဒေသည် သစ်ထုတ်လုပ်သည့်နိုင်ငံ များတွင် သစ်တောဆိုင်ရာ စီမံအုပ်ချုပ်မှုနှင့် ”တရားဝင်မှု” ရှိသော သစ်ထုတ်လုပ်မှုကို အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုရာတွင် သစ်ထုတ်လုပ်မှုနှင့် သက်ဆိုင်သည့်သူ အားလုံးအတွက် စဉ်းစားထည့်တွက်ပြီးလုပ်ဆောင်ရန် ဖြစ်သည်။တစ်ကယ်တော့ မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်းက ပြောသလို မြန်မာနိုင်ငံကိုသာ သီးသန့် ပစ်မတ်ထားသည်မဟုတ်ပါ။ ဥရောပသမဂ္ဂ သစ်ဥပဒေသည် ဥရောပသစ်ထုတ်ကုမ္ပဏီများ နှင့် ၎င်းတို့အား ရောင်းပေးသူများအပေါ်လည်း ရည်ရွယ်သော ဥပဒေဖြစ်သည်။ ဥရောပ ကုမ္ပဏီ များအား ရောင်းပေးသူများသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြသာနာကို နည်းလည်သေည်လည်း ထိုအခြေအနေကို အသုံချသူများဖြစ်သည်။
”မြန်မာနိုင်ငံက အဂတိလိုက်စားမှုနှင့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများကို အလေးမထားဘဲ မျက်နှာလွှဲထားသည့် နိုင်ငံမှာ အိမ်နီးခြင်း တရုတ်နိုင်ငံဖြစ်သည်။ တရုတ်နိုင်ငံသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် တရားမ၀င်သစ်များကို ၀ယ်ယူမှုအများဆုံး နိုင်ငံဖြစ်ပြီး တရားမ၀င်သစ် ၀ယ်ယူမှုကို ဥပဒေနှင့် တားမြစ်မှု မရှိသေးပါ။”
”တရားမ၀င် သစ်ခုတ်မှုနှင့် တရုတ်နိုင်ငံသို့ တရားမ၀င် သစ်ဝင်ရောက်မှုကို ဟန့်တားရန် မြန်မာနိုင်ငံက ၂၀၁၄ တွင် သစ်အလုံးလိုက် တင်ပို့မှုကို ပိတ်ပင်သည့် ကြေငြာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ထို့နာက် နိုင်ငံတစ်ဝှမ်း ၂၀၁၆နှင့် ၂၀၁၇ တွင် သစ်ခုတ်ခွင့်ကို တားမြစ်သည့် ကြေငြာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ သို့သော် တရုတ်နိုင်ငံသည် နယ်စပ်မှတစ်ဆင့် တရားမ၀င် သစ်ဝင်ရောက်မှုမှ အကျိုးအမြတ်ဆက်ပြီး ရရှိခဲ့သည်။ ၂၀၀၇ နှင့် ၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွင်း မြန်မာပြည်မှ တရုတ်နိုင်ငံသို့ နယ်စပ်မှတစ်ဆင့် သစ်လုံးနှင့် ခွဲသားအဖြစ် ၀င်ရောက်ခဲ့သည့် သစ်ပမာဏမှာ ၁.၄ m3 သန်း ရှိကြောင်း သိရသည်။
ငွေတန်ဖိုးအားဖြင့် ဒေါ်လာ သန်းတစ်ထောင်ခန့်ရှိသည်။ တရုတ်နိုင်ငံသို့ ၀င်ရောက်သည့်
”အနာဂတ်တွင် တရုတ်နိုင်ငံနှင့် ဆွေးနွေးရာတွင် မြန်မာခေါင်းဆောင်များအနေဖြင့် မိမိအစိုးရလုပ်ဆောင်နေသော သစ်တောကဏ္ဍတွင်း အဂတိလိုက်စားမှုနှင့် ရာဇ၀တ်မှုများကို ရှင်းလင်းသည့်လုပ်ငန်းစဉ်များကို တရုတ်နိုင်ငံအနေဖြင့် ကူညီပံ့ပိုးပေးရန်
တောင်းဆိုသင့်သည်။ တရုတ်နိုင်ငံအနေဖြင့် ပထမဆုံးလုပ်နိုင်သည့် ကိစ္စမှာ သစ်အလုံးလိုက်တင်သွင်းမှုကို တားမြစ်ပြီး တရားမ၀င် ထုတ်ထားသော သစ်များကို
၎င်း၏ ဈေးကွက်တွင်းဝင်ရောက်မှုမှ တားမြစ်ရန် လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ ထိုသို့လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံကိုသာ အထောက်အကူဖြစ်စေမည် မဟုတ်ပါ။ သစ်တောစီမံအုပ်ချုပ်မှုအတွက် ရုန်းကန် ကြိုးစားနေသော ကမ္ဘတစ်ဝမ်းက အခြားနိုင်ငံများအတွက်လည်း အထောက်အကူ ပြုစေမည်ဖြစ်သည်။
” တရားမ၀င် သစ်ထုတ်လုပ်မှု၏ အရင်းအမြစ်ကို ၀န်ကြီးဌာန တစ်ခုတည်းက ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်နိုင်မည် မဟုတ်ပါ။ ရှုပ်ထွေးပွေလီသော သစ်တော ရာဇ၀တ်မှုများကို နည်းအမျိုးမျိုးဖြင့် ကြိုးပမ်းလုပ်ဆောင်သော သစ်တောဌာန၀န်ထမ်းများ၊ ပုဂ္ဂိုလ်များ
ကို တွေ့ခဲ့ ဖူးပါသည်။ အစိုးရတစ်ခုလုံး၏ ပံ့ပိုးမှုမရှိဘဲ သူတို့ဖာသာ လုပ်ဆောင်နိုင်မည် ဟု မျှော်လင့်ခြင်းသည် မှားယွင်းသည်။”
”သမ္မတသည် သူ့အစိုးရအနေဖြင့် ဥပဒေချိုးဖောက်သော သစ်လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် ထိပ်ပိုင်းအဆင့်
ပုဂ္ဂိုလ်များကို အရေးယူဖမ်းဆီးနိုင်ရန် ဌာနပေါင်းစုံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သော အထူးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခြင်း
ဖြင့် လုပ်ဆောင်ရပေမည်။ ရိုးသားပြီး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုကို စတင်လုပ်ဆောင်လိုသူများသည် ရိုးသားသော တရားသူကြီး၊ ဖမ်းဆီးအရေးယူမည့် အရာရှိနှင့် တရားစွဲဆိုမည့် အရာရှိများ၏ ကူညီပံ့ပိုးမှု လိုအပ်နေသည်။ မြန်မာသစ်များကို နိုင်ငံတကာဈေးကွက်သို့ စတင်ရောင်းချခဲ့သည့်
၁၉၈၉ ခုနှစ်မှ ယခုအချိန်ထိ အကျိုးအမြတ်ရရှိနေပြီး လက်ရှိတွင်လည်း လုပ်ပိုင်ခွင့် အာဏာကို ဆက်လက်ဆုပ်ကိုင်ထား မြန်မာစစ်တပ်၏ ဆိုးမွှေများဖြစ်သည့် ဤပြသာနာကို ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ရန် ခက်ခဲပေလိမ့်မည်။”
”ကျွန်းသစ်အပါအ၀င် သစ်မာများကို တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများနှင့်
သဘောတူညီမှု ရယူရာတွင် အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဌာန (National Reconciliation and Peace Centre- NRPC) က သစ်ထုတ်ခွင့် ပေးနေမှုများ မလုပ်ရန် မြန်မာခေါင်းဆောင်များ ရှင်းလင်းစွာ ညွှန်ကြားသင့်သည်။ NRPC က National People’s Liberation Front (KNPLF) အဖွဲ့ကို ကယားပြည်နယ်တွင် သစ် တန် ၅၀၀၀ ထုတ်ခွင့် မကြာသေးမီက ချပေးခြင်းသည် ကောင်းမွန်သော သစ်တောစီမံအုပ်ချုပ်မှုကို အလေးမထားရာရောက်သည်။ ထိုလုပ်ရပ်ကြောင့် NRPC သည် အဘယ်ကြောင့် မြန်မာ့သစ်တောများနှင့်
သက်ဆိုင်ပြီး ဆုံးဖြတ်နိုင်သည့် အာဏာရှိနေရသလဲဟု မေးခွန်းမေးစရာ ဖြစ်သည်။ ပွင့်လင်းမြင်သာမှု ကင်းမဲ့ခြင်းကြောင့် သစ်ထုတ်ခွင့်သည် တန် ၅၀၀၀ သာ ဖြစ်ကြောင်းအမှန်ကို
ထိုသစ်ထုတ်မှုမှ အကျိုးအမြတ်ရရှိသူမှ လွဲပြီး မည်သူမှ သိမည်မဟုတ်ပေ။ ထိုသစ်များ ထွက်ရာဒေသနှင့် မည်သူ့ထံရောင်းချပေးသည်ကိုလည်း မသိနိုင်ပါ။”
” ထို့အပြင် သက်ဆိုင်ရာ သဘာဝအရင်းအမြစ် ကော်မတီများတွင် ဗဟုသုတရှိပြီး၊ အရည်အခြင်းပြည့်သောသူများရှိသည်။ ထိုသူများသည် ပြသာနာကို ဘက်ပေါင်းစုံမှ ဦးဆောင်ပြီး ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်နိုင်သည်။ လွတ်တော်အနေဖြင့်ထိုကဲ့သို့အစွမ်းအစရှိသူများနှင့် သိနားလည်သူများကို အသုံးပြုသင့်သည်။ ထိုသို့ လုပ်ဆောင်ရန် မှုဝါဒချမတ် ဆောင်ရွက်ရာတွင် ဒေသခံများ၊ ဌာနေတိုင်းရင်းသားများ၏ အကြံပြုချက်ကို ရယူရမည် ဖြစ်သည်။ ဒေသခံများသည် မိမိတို့လိုချင်သည့် ပြသာနာအများအပြား၏ အဖြေကို သိရှိထားပြီးဖြစ်သည်။
”ကမ္ဘာက မြန်မာနိုင်ငံကို ကြည့်နေပြီး ပြန့်နှံ့နေတဲ့ အဂတိလိုက်စားမှုကို မြင်နေရပါတယ်။ သမ္မတ၀င်းမြင့် အနေဖြင့် အဂတိလိုက်စားမှု မရှိတဲ့သူတွေကို ရှာဖွေပြီး ဥပဒေကိုလိုက်နာ အရေးယူ ဆောင်ရွက်မည့် ဌာနများနှင့် တရားစီရင်ရေးဌာနများတွင် တာဝန်ပေး လုပ်ဆောင် စေသင့် သည်။”
”မြန်မာနိုင်ငံသားများနှင့် သစ်တောတွေကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲပြီး ရှေ့ဆက်သွားနိုင်ဖို့ ဤနည်းကသာ တစ်ခုတည်းသော နည်းလမ်းဖြစ်ပါသည်။”
REPORT: STATE OF CORRUPTION
National People’s Liberation Front